Dulmarka guud ee cudurada haweenka ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Dulmarka guud ee cudurada haweenka ee Columbus, OH
Waa maxay Gynecology?
Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, daryeelka haweenka waa shaqadayada nolosha. Waxaan fahamsanahay in sida haweeney mashquul ah, aysan mar walba fududeyn in waqti laga saaro jadwalka mashquulka ah si loola tashado bixiyaha. Tani waa sababta aan u bixino tilmaamo la heli karo oo loogu talagalay weydiimaha guud ee haweenka. Fadlan xasuusnoow in caafimaadkaagu uu muhiim yahay, iyo inta badan, waxaa laga yaabaa in loo baahdo inaad ballan la samaysato mid ka mid ah dhakhaatiirtayada ama kalkaaliyayaashayada si loo helo qiimayn iyo daawayn habboon. La xidhiidh xafiiskayaga Columbus, OH, maanta si aad ugala hadasho xulashooyinkaaga xubin khabiir ah oo kooxdayada ah.
Waa maxay adeegyada haweenka ee la bixiyo?
Waxaa jira adeegyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu daweeyo cudurro kala duwan, caabuqyo, iyo xaalado kale. Shaqaalaheenna Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay aqoon sare u leeyihiin ogaanshaha iyo daawaynta arrin kasta oo laga yaabo inaad qabto. Waxaan bixinaa adeegyada soo socda ee dhakhtarka dumarka:
Well Woman Care (oo ay ku jiraan baaritaanka Pap iyo baaritaanka naasaha)
La kulan OB/GYN Maanta
Marka ay timaado caafimaadka dumarka, waa muhiim inaad hesho xirfadle caafimaad oo aad ku kalsoonaan karto. Xubin kasta oo ka mid ah Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa si gaar ah loogu doortay natiijada naxariista ay u qabaan bukaankooda iyo u heellanaanta goobtooda. Na soo wac maanta si aan u qabanqaabino la-tashi xaruntayada Columbus, OH.
Imtixaan sanadle ah oo sifiican looga qaado haweeneyda waxay siisaa haweenka da'da yar daryeelka kahortaga oo ka bilaabaya da'da dhallinta.